Yaa masuul ka ah magac xumada Soomaalida Sweden? | Somaliska
Maanta waxaa wargeyska Aftonbladet lagu soo qoray mowduuc loogu magacdaray “Soomaalida cusub waxay u baahanyihiin hogaamin” oo ay soo qoreen 5 ka mid ah Soomaalida haysata dhalashada Sweden. Mowduuca ayay kaga hadleen dhibaatooyin haysta Soomaalida Sweden iyo sidii xal loogu heli lahaa. Waxyaabaha i soo jiitay ee mowduucaan ayaa waxaa ka mid ah in dhowr jeer ay xubnaha ku celceliyeen in ay yihiin Soomaali-Swedish ah oo ku dhashay ama muddo dheer ku noolaa wadankaan. Waxyaabaha kale ay ee ay ka dhawaajiyeen ayaa ah in wali Soomaali cusub ay wadanka imaanayso kuwaasoo ay saamayn ku yeelatay colaaada wadanka una baahan hogaamin iyo waxbarasho si loogu fududeeyo isdhexgalka loogana hortago xagjirnimada.
Hadaba su’aashu waxay tahay. Yaa masuul ka ah magacxumada Soomaalida Sweden? Ma dadkii hore ee wadankaan waqtiga dheer ku noolaa mise kuwa cusub? Aniga aragtidaydu waxay tahay in magacxumada wadanka noo gashay ay masuuliyadeeda inta badan leeyihiin Soomaalida wadankaan waqtiga dheer ku noolaa, ee tusaalaha u noqday mashaqaysatayaal iwm. Dadka darbiyada jiifa ee Soomaalida ah ayaa inta badan u badan kuwo waqti hore wadanka soo galay oo nolosha ka dhacay. Kuwa wadanka la qabsatay xitaa qeyb ayay ku leeyihiin eeda oo laftooda waxaad u malaysaa in ay ka cararayaan magaca Soomaalida. Dadkii hore ee wadankaan soo galay ayaan waddo fiican u falin kuwa cusub, oo xitaa marka qofka cusub uu wadanka soo galo siiya talooyin qaldan oo qofka cusub ku abuuraya rajjo la’aan iyo in uu dareemo in aysan wadankaan ka jirin fursado.
Dhalinyarada amaan darada ka samaysa Sweden gudaheeda isla markaana ku biira dagaalada Al-shabaab iyo ilaa Syria ayaa ah kuwo inta badan ku dashay wadanka Sweden. Taasoo muujinaysa in waalidiinta Soomaalida ee wadankaan waqtiga badan ku noolaa ay gabeen hawshooda.
Dadka cusub ee wadankaan soo galay shantii sano ee la soo dhaafay ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu firfircoon Soomaalida ku dhaqan Sweden. Waa kuwa ay ka go’antahay in ay shaqaystaan oo ay wadankaan wax ka qabsadaan. Taasoo ay ugu wacantahay in aysan rajjo fiican ka qabin wadankii Soomaaliya oo aysan islahayn barito ayaad laabanaysaa.
Anigu waxaan qabaa in hogaaminta iyo isdhexgalka dadka cusub uu ka fududyahay midka dadkii hore. Qofka cusub ayay fududahay in wax laga dhaadhicyo halka qofka wadankaan mudada badan ku noolaa uu dareensanyahay in uu waxkasta yaqaano isagoo aysan waxba u bilownayn. Dadkaas waxay dareemayaan ceeb in ay bulshada ku soo dhex laabtaan oo hada ay zero ka soo bilaabaan oo ay iskuul galaan.
Anigu waxay ila tahay in wadankan ay fursad ka jirto lkn somaliada ayada aya kala qeybsanan weyn ka dhexjirta Anigu waxan ahay kuwa cusub alx hada wadankan si wanagsan ayan ula qabsaday, waxan qaba dadka cusub in aysan dhageysan kuwi hore Madama ay yartahay faidada ad ka heli karto lkn adiga dadaal sxbo sameyso wadanka u dhashay adiga oo ka faideysanaya dhanka luqada iyo information ka kale e ku sabsan wadanka IWM.
Marka hore waad salaamantahay!.
Markii add warkan qoraysay inaad soo raaciso “Källa” ayay ahaid.
Wararka inta badanka waad soo qortaa uun. Waxaan add uu wanaagsnaan lahaid hadii add soo raciso xogta. Då är det lättre att läsa mer om detta!
Waad ku mahadsantahay anyways!
Anigu waxaan qabaa, diinta ayaa hortaagan is dhexgalka.
Maadaamaa qofka cusub uusan haysan diin islam, waa ufududahay, is dhexgalka, iwm.
Waayo qof soo quustey makala jecla, laakiin waxaas laweyn qofka muslimkaa.
ASC waxaan u mahad noqoyaa Ilaahii na abuuray.
Marka aan ka hadlayno mowduucaan aniga waxa ay ila tahay qof waliba sida uu ku ahaay gurigii uu ka yimid sida uu ku ahaay in uu la yimid halkaan aan ku noolnahay iyo dad markii horeba aas aaskooda dilnaay oo hadane isla weyn iyo kuwa lagu magaabo galti macaruufka.
Sidaasi daraadeed waxa ay ila tahay ceebta Soomaalida in ay keeneen kuwa waqtiga dheer joogay dalkaan oo gabay toodii.
Waxaa jiro kuwo mar hore soo galay laakiin aanan hore wax u soo baranin kana shaqaysta,shaqooyinka xamaaliga dalkaan,laakiin Ilaahay ku beeray xaasidnimo iyo isla weynin iyo qabyaalad .
kuwaas oo markii aad la sheekaysato aad ka arkayso in ay faan badan yihiin oo iska dhigo kuwo wax walbo xariif ku ah.
Walee waa saa u tiri 98%
Umu Sundus says:
Asc wr wb hadii aan fikirkeyga ka dhiibto wexeey ila tahay inneey masuul ka yihiin dadka halkan ku dhashay ama dadka waqtiga dheer ku noolaa wadanka ee is mooday inney wadanka uu yahay koodi misana gabay danahoodi si fududna ku illoobay dhaqankii eey asal ahaanta ulahaaye thanks all
Umu Khalid says:
Ascwrb dhamaan akhiyaarta sharafta leh ee warka falanqeeya hadii aan fekerkayga ka dhiibto waxay ila tahay dadku waa Somali dalkuna waa Sweden Somaliduna ma firfircona oo ma jeclaha in ay xoogooda cunaan inkastoo ay ku jiraan in yar oo jecl shaqada ogna sharafta ay leedahay shaqadu marka dadka wadan kaan u dhashay iyaguba ma jecla somalida la nool dadkii horena qaladka waxbay ku leeyihiin
oo wax wanaagsan uma tabcin dadka cusub
asc. Hadaan kadhiibto fikirkeeyga wxaa soomaalida oogu wacan
laqabsila aanta wadankan iyo shaqola aantan luuqadoo adag iyo
leeysankoo adag oo shaqadii la,arkaba shuruud ooga dhigi
adoo mahadsan hadaan su,aalkuweeydiiyo wiilkan wek iskale
waamid aniga khaas ii aha.
sanadka cusub bisha koobaad yaan maqlay imtaxaanka gaadhiga
afsoomali yaalagu galayaa arintaas maxaadkalasocotaa?iigasoojawaab
asc awalan wad mahadsantahay sxb horta in cayb nagu haysato dalkan waa marag madoonto lakin somalida hal mid ayan leeyahay anogoon qolana si gooni ah u dhaliilayn in ay mid noqdaan oo uquuqda ay alkan ku leeyhin gartan si wada jir ah na u raadsadaan dadkan aynu la noolnahay waxyabaha ay ngu dhaliilaan waxa ka mida halkana jaaliyad kuma tihin dalkinana dowlad kuma tihin waad mahadsantihin
Dadki hore ee wadankaan yimid qaati bilaah aan ka joognaa, badankood markaad meel kula kulanto waxey daneeyaan iney qabiilkaada ogaadaan kadibne maalinta xigta ay ku arkaan waxey ku leeyihiin ” oow war ninki reer hebel aa yimid” kuligood dadki hore xiliga kala qixi sida ay canjaladi qabiilka ugu qunfulantey ayey weli 2013 ugu qunfulantahay. dadki hore ee wadankaan yimid badankood waa wax ma isku tarayaaal qabiilki ku dhegen, kan hada dhow ka yimid wadanki qabiil ma daneeyo.
abuukargaabka xaaji says:
ASC dhamaan asxaabta iyo saaxibka mowducan qorey waa mahadsantihiin, ee hadi aan ka dhibto fikirkeyga halkan, aniga waxan ka mid ahey dadka ku cusub dalkaan sweden, ee run ahaanti waxan uu imid dad uu qabiilku dilodey oo ka daran kuwii jogey dalka mahan xitaa jaahil waxa laga yaaba in uu yahaye mid wax bartey,!!! laakin wax barshadisa mahan mid kalxanaha u dhaafsisan marka aad talo weydiso waxa uu ku leyahaye anigaba waligey ma shaqeyn sweden malahan shaqo,iyo W/LM marka intaas waxa si dher isla weyni, waxa aye somalidu taqaana in aye sameystan lokalo si gaar ah lo leeyahaye oo ku saleysan qaab qabiil, waxaa intaa dheer malahan jaaliyad aye ku mideysan yihin, malahan dowlad la aqonsadey iyo safaarad amrka dadka cusub iyagaa ayaa og waxa aye ka bilabayan hadi aye ku birayan kuwii hore iyo hadi aye ilaalsanyaan sharftoda waa in aye shaqeystan mahdsanid saxibka mowduca salaama
Anniga waxaan ka mid ahay dadkii dambe ee wadankaan soo galey shantii sannoo ugu dambeysey dhibaatada nagu dhacdeyna waxaan qabaa iney mas,uul ka yihiin dadkii hore waayo waxaan arkey soomaali iney shaqeysato iska daayee kugu waanineyso inaadan waxba baran oo aadan faaiideysan si aad ceyrta isaga qaadato iyo madaxdii dalkaan oo na naceen aanan rumeysaneyn wax walboo aad u sheegto iyagoo naga aaminey wax jiro inaanan aheyn waxaana nalagu adkeeyey shaqooyinkii waxbarashadii isdhexgalkii bulshada dacwooyinkii wax walboo aad sheegtidna waxaaba naloo arkaa ma shaqeystayaal been badan oo wadanka aan waxba ku soo kordhineyn
walaahi waxii runtaa waa aqrisanay lkn aniga waxaan oran lahaa 1mida hore dadki hore iyo kuwa danbaba waa dadkeeyga ee ceeb alaha asturo hana la wada dadaalo hada iyo koow camal marka 2 aad wiilka wax soo qorey ee saleebaan waxaan oran lahaa war xigmadaysan soo qor walaal ama iska aamus waa dariiqa rasuulka na faree kadaa web ka fikradaha aad diinta kula ordeeysid misane beentaa
yaa kuu sheegay dadka cusub in aysan diin haysan adoo kasoo horeeyayna aad diin sheeganayso walaal dadka ha dhihin diin mahaystaan lkn adaa mudo dheer jiiftay ee hada yuusan dadka ku dhaafin dadka socda raac diintana haku gamban yaaaaa
asc waxaan aad iyo aad ula yaabay ninka la yiraahdo suleymaan ee ay ka soo yeertay soomalida diin ma haaystaan waa arin gef ah oo aad ka gashay ummadaan islaamka ah ee ahlu towxiidka ah adiga hadaadan islaam aheeyn ha u qaadan in dhamaan dadka noocaada wada yahay
alxdulahi. mida labaad aniga waxa ay ila tahay in ay ku xirantahay hadba qofka sida uu u fakaro. midbaa aaminsan in aan wadankaan wax laga qabankarin midkale ayaa dadaalaya.